FCC waxay shaandheysaa iPhone X oo dahab ah sida muuqatana maahan xanta | Wararka IPhone
Apple ayaa si dhab ah u socota daadin shaqaalahaaga. Waa wax caqli gal ah in shirkad noocan oo kale ahi u ilaali si sharci ah iyo siyaasad ahaanba tusaalooyinkaaga iyo qalabkeeda mustaqbalka laba sababood: tartanka iyo layaabka isticmaalaha. Tilmaamaha Apple waxay joojiyeen inay noqdaan waxa ay ahaayeen xilligii aan ogaanay waxa aan ku arki doonno nabadgelyo buuxda.
La Guddiga Isgaarsiinta Federaalka Mareykanka ayaa faafiyay qaar ka mid ah sawirrada iyo dukumiintiyo dhowr ah oo aan ku arki karno dahab midabkiisu yahay iPhone X. Maya, sida muuqata ma ahan warar la isla dhexmarayo ama wax aan macno lahayn oo daadanaya, laakiin waa halkii dhammaan macluumaadka ku jira dukumintiga way iswaafaqsan yihiin. Marka dahabku wuxuu u noqon karaa midab cusub iPhone X dhowaan.
A dahab dahab ah iPhone X ... waxaa laga yaabaa in
Toddobaadyo ka hor soo bandhigga iPhone X waxaan ogaanay dhinacyo gaar ah oo ku saabsan qaabeynta, laakiin ma aanan ogeyn midabada lagu heli lahaa. Waqtigan xaadirka ah waxay ku jirtaa oo keliya cirro iyo lacag, laakiin midab cusub ayaa la abuuri lahaa laakiin aan lagu iibin karin tufaaxa weyn: Midab dahabi ah.
Daadinta ugu dambeysay waxay ka timid FCC ka yimid Mareykanka, kuwa daabacay dukumiintiyo taxane ah iyo sawir muuqaal ah oo aad si muuqata ugu arki karto dahab ah iPhone X, wax aan hadda suuqayn. Mid ka mid ah sawirrada waxaa si cad loogu arkay in shaashadda ay leedahay LCD, waana wax la yaab leh maaddaama shaashadaha qalabkan ay leeyihiin teknolojiyadda OLED, waana wax ay ku sifoobeen.
Dukumeentiga la sifeeyay waxaad ku arki kartaa tixraaca aaladda A1903. Taa bedelkeeda, iPhone X ee maanta la iibinayo waxay leeyihiin saddex tixraac: A1865, A1901 iyo A1902. Markaa iPhone X dahab Waxay ku socon kartaa suuqa si kadis ah, ama waxay noqon laheyd midab aan qancin karin Apple mana suuq geyn doono, in kastoo mala-awaalkan uusan cadeyn.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Noticias » FCC ayaa daadinaysa iPhone X oo dahab ah sida muuqatana maahan xan